Jidka Dhiig Ogadeen: Wadka Shacabka Degaanka Somalida Ogadeeniya – Rasaasa News
Jidka Dhiig Ogadeen: Wadka Shacabka Degaanka Somalida Ogadeeniya
Rasaasa News, July 10, 2014 – Atoobiya oo leh ciidamada ugu badan dalalka Afrikada Bari, waxay tirada ugu badani ku sugan tahay Ogadeniya. Xadka colaada ee Ethiopia-Eritrea wuxuu galayaa kaalinta labaad.
Dagaalka Xoraynta ee ka socda Ogadeeniya 2o-kan sano ee ugu dambeeya, Atoobiya way ku guulaysan wayday, waxayna dagaal ku qaaday shacabka Somalida Ogadeeniya, iyada oo gaysatay xadgudubyo lid ku ah xerarka caalamiga ah sida; barakicin, gubid tuulooyinka, dilal wada jira, dilal qarsoon iyo kuwa muuqda iyo kufsi.
Xadgudubyadaasi waxaa diiwaangaliyey ururo caalami ah, arimahaas waa lagu canaantay Atoobiya, waxaa kale oo lagu canaantay wax u qabasho la,aanta dadka ay gumaysato. Maxaa la ii ogaan darteed Atoobiya waxay Ogadeeniya ka caydhisay dhamaan Hayyadihii samafalka ee ka shaqayn jiray, kuwaas oo ilaa hada ka maqan.
Dalalka reer galbeedka oo inta badan danahooda gaarka ah wata, waxay ku cadaadiyeen Atobiya in malaayiinta kaalmada ah ee la siiyo ay wax ka gaadhsiiso Somalida Ogadeniya, gaar ahaana wax ka qabto dhinaca isgaadhsiinta.
Sanadkii 2008, Atobiya waxay bilawday dayactirka jidka ay shacabku ugu yeedhaan “dhiig Ogadeen” oo isku xidha Jijiga iyo Godey, kaas oo horay Talyaanigu u dhisay 1932.
Atoobiya si ay lacago dheeraada ugu hesho ciidamadeeda tirada badan, waxay ku dacwootay in ONLF, ay diidan tahay dhismaha Jidka. Waxayna codsatay in lacag lagu siiyo askar waardiyeysa Jidka loo bixiyey dhiig Ogadeen.
Xidhiidhka ka dhaxeeya dhimashada Shacabka iyo Jidka Dhiig Ogadeen
Ujeedadda ugu mihiimsan ee ay Atoobiya ciidamo u dhigtay dhul baaxadiisu tahay 800KM, kuwaas oo isu jira taako taako, waxay ahayd in ay ciqaabto shacabka si ay uga barokacaan degaanadooda. Wayna dhacday arintaasi.
Shacabka Somalida Ogadeeniya 80% waa reer Miyi xoola dhaqato ah. Waxayna dadka Miyiga badankoodu haystaan qoryo ay xoolaha kaga ilaashadaan habar dugaaga.
Marka laga tago dagaalka ay wado ONLF. Muddo 34 sano ah Ogadeeniya waxaa ka socday dagaalo xidhiidh ah, waxaa kale oo uu gablku daris la yahay dalka Somaliya oo ay colaad sokeeye ka socotay 23 sano. Sidaas daraadeed shaki kuma jiro in dadka shacabka ah ay hubaysan yihiin.
Dawlada Atoobiya wax qorsha ah oo ay hubka gacanta shacabka ku jira kaga soo celinayso ma jirto, laakiin waxay qaadatay qorshe ah in ruuxii qori wata ee la arko la dilo. Taas micnaheedu waxaa weeyey in shacabka Somalida la laayo.
Ciidamada Atoobiya waxay saldhigyo ku leeyihiin buuraha iyo dhulka reer miyigu dego ee xoola daaqeenka ah. Aroor walba 7:00Am, gadiidka milatarigu waxay daabulaan ciidamo gaadh ka qabta Jidka dhiig Ogadeen, waxayna shaqada gaadhku dhamaataa 17:00PM. Tobanka saac [10 saac] ee ay ciidamadu gaadhka ka hayaan Jidka dhiig Ogadeen cidii aan gaadhi saarayn ee ay jidka ku arkaan way dilaan. Arintaasi waa xaqiiq mana jirto cid sheegta iyo cid sheegata midna.
Warbixin iyo xogo aan ka soo uruurinay dadka reer miyiga ah iyo dadka degan tuulooyinku, waxay noo sheegeen in ay qabaan dhibaatooyin xanuun badan oo ku dhaca maalin walba, kuwaas oo isugu jira kufsi, dil iyo dhac.
Qaar ka mida dadka reer miyiga ah oo aan waraysanay, waxay sheegeen in dadka laga dilay afar  sano gudahood ay ka badan yihiin dadka ku dhintay dagaaladii hore iyo ku mawdku dilay oo la isku daray. Xasan oo ka mida dadka reer miyiga ah ee ay saamaysay arintani wuxuu yidhi “habeen ayna oohin reerkan ka yeedhin ma jirto, waxa aad maqashaana waa haween baa la kufsaday ama xoolaa la kaxaystay ama ruux baal la toogtay.” Xasan wuxuu sheegay in qoftiisa iyo gabadh uu dhalay la kufsaday, oo gabadhii ay wadanka ka baxsatay meel ay jirtana uusan ogayn muddo hal sano ah.
Dhibaatooyinka xun ee aan ciirsiga lahayn ee ay qabaan dadka Miyigu ma jirto cid ka warhaysa iyo cid ka caawinaysa dhibaatada haday sheegtaan. Waxayna ka cabsadaan in la ciqaabo haday sheegaan dhibaatooyinka ay ciidamadu u gaystaan. Xasan oo aan jeclayn in ay cid kale ogaato warka uu xigtonimada noogu sheegay ayaa yidhi “waxba ma qaban karo, wixii Eebe reebo ayaan arkaynaa.”!
Waxaan waydiiyey, maxaad ugu sheegan waydeen dhibaatada dadka Somalilda ah ee la shaqeeya Xabashida. Wuxuu ku jawaabay Xasan waa isku mid kuwa af garanaya ayaaba noogu daran.
Dadka reer Miyiga ah ayaan waydiiyey maxaa jidka loogu bixiyey Jidka dhiig Ogadeen? Waxayna iigu jawaabeen xisaab ma laha inta ruux jidka ka talaabaya xabad lagu dhuftay. Dadk reer miyigu waxay ii sheegeen in ay guuraan habeenkii si ay jidka uga gudbaan, xiligaas oo askarta jidka laga qaado.
Arimaha tiiraanayda leh ee ay ii sheegeen shacabku waxaa ka mid ah in dad badan ay ka guureen dhulkan oo ay dhiig iyo dhaqan ku darsadeen beelaha Somaliyeed ee xadka ka baxsan.
Dhulka ku dhaw Jidka [5km ama 3 miles], wax dad ah laguma arko, laga bilaabo Qabri-bayax ilaa iyo Godey. Kolka aad ku safrayso dhulkaas waxaa niyadaada ku soo dhici in dhulku yahay dhul lagga mamnuucay reer miyiga iyo xoolaha oo loogu talo galay dhul “Seero ah” dhulka ugaadhu daaqdo.
Inta aan socdaalka ku jirtay Jijiga iyo Godey, waxaa kale oo aanan arkin wax beer ah oo ku taal dhulkaas. Dhulkaas oo ahaan jiray dhul aad loo tabcado. Waxaan hore u haystay warbixin ah in dadku tacabka u joojiyeen labo arimood; Liyuu Booliska oo canshuur badan ka qaaday iyo in UNHCR ay dadka siiso raashin, kaas oo laggaga maarmay tabicii. Waxaanse socdaalkan ku ogaaday in ay jirto arin saddexaad oo ah in aan dhulkaas beer laga abuuran karin, dhulka uu jidku maro waa dhulka ugu fiican tabac horena loo tabcan jiray.
Kolkaan si dhab ah u dhagaystay shacabka, indhahaygana ku arkay dhibataada ka jirta dhulkaas, waxaan ciwaanka qormada u qaatay magaca ay shacabku u bixiyeen jidka dhiig Ogadeen ee dhaxeeya Jijiga iyo Godey. Kaas oo runtii aan hore u jeclaa, haatanse aan jeclayn sababta oo ah waa dilaa qarsoon.
Waxaan damcay in aan arintan wax ka waydiiyo masuuliyiinta degaanka oo runtii aad ii soo dhaweeyey, laakiin waxay dad ehelkay ah ii sheegeen in aan arimahaas kala hadal masuuliyiinta. Waxayna sababta iigu sheegeen in iyaga su,aalahayga iyaga dib loogu ciqaabi, loona qaadan in ay warbixinta i siiyeen!
Warbixintan waxaa na soo gaadhsiiyey ruux magiciisa ku soo gaabiyey M M X
ONLF oo Xoojisay Weerarada ay ku Qaadayso Ciidamada Atoobiya iyo Maleeshiyaad ka Goostay Kilalka.
Faalo: Wali ma Iswaydiisay, Sababta Qurbo-joogtu Ugu Qulqulayaan Jijiga!